Showing posts with label လူမှု့ဘဝ. Show all posts
ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှုတွင် သေဆုံးခဲ့ရသည့် ဦးနေ၀င်း၏မိဘနှစ်ပါးကို နာရေး ကူညီမှုအသင်း ဦးကျော်သူ ပြောလိုက်သည့် စကား
ဇေယျာသူရ9:36:00 AM ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှုတွင် သေဆုံးခဲ့ရသည့် ဦးနေ၀င်း၏မိဘနှစ်ပါးကို နာရေး ကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)က ရာသက...Read More
ဘဝမပျက်လိုလျင် ဤ Post လေးတော့ အရေးတကြီး ကြည့်စေချင်သည် အလိုလိုက်ခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဇေယျာသူရ5:40:00 AM ******************************* စာရေးသူ-မင်းသွေးငယ်(ရာမညမြေ) သမီးက ၃ လ တည်းပါ ဖျက်ချပေးပါရှင့် ...Read More
ဘဝမပျက်လိုလျင် ဤ Post လေးတော့ အရေးတကြီး ကြည့်စေချင်သည် အလိုလိုက်ခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာ Reviewed by ဇေယျာသူရ
အိမ်ခြေရာမဲ့တွေကို လိုက်ရှာပြီး ကူညီတက်သော နေဂျာများအကြောင်း လူအကြည့်များ
cctvထဲမှ မှတ်တမ်းတင်ခံရသော ဆူပါ ပါဝါ လူသားများ shareနော်
ကျွန်မသာလျှင် မယားအစစ်ဖြစ်ပါကြောင်း ဇေယျာသူရ3:33:00 AM " ဒါက ဘယ်သွားမလို့လဲ မောင် " " သြော် ထုံးစံအတိုင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အာလာပ သလ္လာပ သ...Read More
ကျွန်မသာလျှင် မယားအစစ်ဖြစ်ပါကြောင်း Reviewed by ဇေယျာသူရ
ရသေ့ကြီး နဲ့ ပြည့်တန်ဆာမလေး အဖြစ်အပျက် လူအကြည့်များ
ဇေယျာသူရ11:39:00 PM ☀ ရသေ့ကြီး နဲ့ ပြည့်တန်ဆာမလေး။ ❖ တစ်ခါ က သာဝတ္တိမြို့ အစွန့် တောစပ်မှာ ရသေ့ကြီးတစ်ပါး တဲလေးထိုြး...Read More
မီးလောင်တိုက်အတွင်းမှ အေးအေးချမ်းချမ်းပြန်ထွက်လာခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ရဟန်းတစ်ပါး ရုပ်သံ ဇေယျာသူရ6:54:00 PM
မီးလောင်တိုက်အတွင်းမှ အေးအေးချမ်းချမ်းပြန်ထွက်လာခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ရဟန်းတစ်ပါး ရုပ်သံ Reviewed by ဇေယျာသူရ
ပုရိသတွေကြား ဂယက်ခက်သွားသော လယ်သူမလေး အကအလှ
ဗိုလ်အောင်ဒင်သီချင်းနဲ့ လက်စွမ်းပြတဲ့ ရေတပ်မြန်မာစစ်သားများ အင်တာနက်တွင်လူအကြည့်များ
သူတပါးကို ဆက်ဆံရင် သတိထားရန် ၉ ချက် ဇေယျာသူရ1:29:00 AM ၀၁. နားထောင်ခြင်း (သူ့ရင်ထဲမှာပြည့်နှစ်နေတဲ့ပြသာနာတွေကို သူစိတ်ပေါ့သွားသည့်တိုင်အောင် နားထောင်ပေ...Read More
သူတပါးကို ဆက်ဆံရင် သတိထားရန် ၉ ချက် Reviewed by ဇေယျာသူရ
မြန်မာ idol ပြိုင်ပွဲမှာ ဝတ်ဖို့ သိန်းတစ်ထောင်ကျော် အကုန်ကျခံထားတယ်လို့ ပြောတဲ့အဆိုတော်
ဇေယျာသူရ7:44:00 PM မြန်မာ idol သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ ဒိုင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရင်း ဝတ်ဆင်ဖို့ ဖက်ရှင်ပိုင်းကို သိန်း...Read More
နိုင်ငံတကာထိပ်တန်းအသိမှတ်ပြုခံရသော အတော်ဆုံး မျက်လှည့်ပညာရှင်
ရန်ကုန်လိုင်းကားတွေကြပ်လို့ စိတ်ညစ်နေရင် ဒါဖိုင်လေးကို နိပ်ကြည့်